Bishnu Sharma: घोडा बेचेर गाडी, मुस्ताङमा खुसीसँगै चिन्ता
घोडा बेचेर गाडी, मुस्ताङमा खुसीसँगै चिन्ता
विष्णु शर्मा जनवरी १९, २०१३
हिमालपारि कागबेनीका धारा गुरुङको चिनारी उल्टिएको छ । तीनताकको घोडाखच्चर धनीबाट अहिले उहाँ मोटरधनी हुनुभएको छ । अहिले उहाँसँग मोटरसाइकल, ट्रयाक्टर र दुइटा जिप छन् ।
उहिलेको भरिभराउ घोडा र खच्चरका गोठहरू रित्तिएका छन् र अहिले ती ठाउँ मोटर पार्किङ बनेका छन् । "तीसवटा हिमाली घोडा र एक सय खच्चर थिए", अतीत उधिन्दै गुरुङले भन्नुभयो, "अब ती सबै विस्थापित भए ।
" मुस्ताङ-कोरला सडक सञ्चालनमा आउन थालेपछि धारालाई मोटर किन्ने रहर जागेको हो । अहिले उहाँको गोठमा २० घोडा र झन्डै ४० जति खच्चरछन् । "अरु सबै बेचेर सकिइसके", गुरुङले भन्नुभयो, "अब यी पनि बेच्ने सुर गर्दैछु ।" कुनैताका यो हिमाली पहाडको ट्रक भनेर चिनिने घोडाखच्चरभन्दा मोटरमा लगानी गरे नाफा हुन्छ भन्ने गुरुङलाई लागेको छ । एउटा खिरिलो घोडालाई एक/डेढ लाखसम्म पर्छ ।
त्यही घोडा बेचेर धाराले तीन लाख १६ हजार मोल पर्ने भीआर मोटरसाइकल किन्नुभएको छ । दैनिक जोमसोमदेखि कागबेनी ओहोरदोहोर गर्न र सामान ढुवानी गर्न उहाँलाई यीसवारीले सघाएका छन् । "घोडा भए दाना खुवाउन र बिरामी हुँदा उपचारमा लाग्नुपथ्र्यो", उहाँ भन्नुहुन्छ, "मोटरसाइकललाई पेट्रोल भए हुन्छ, घोडाको काम सबै मोटरसाइकलले गर्छ ।"
घोडाका एकाध फाइदा पनि छन् भन्ने उहाँलाई थाहा छ, पर्यटक बोक्ने र मलिलो मलको उपलब्धता । पर्यटकले दिनको नौ सय तिरेर घोडा सयर गर्छन् । घोडा नहुँदा पर्यटकहरू हिँडन् र मोटर चढ्न बाध्य छन् । "गजबको संस्कृति थियो घोडा र खच्चर हुँदा", गुरुङले भन्नुभयो, "याक र झोपालाई भारी बोकाउँदा पर्यटकहरू फोटो खिच्न ओइरिन्थे तर विकासको खुसीसँगै यहाँका बासिन्दामा परम्परा हराउने चिन्ता पनि उब्जिएको छ ।"
धाराजस्तै उपल्लो र तल्लो मुस्ताङका अधिकांशले घोडाखच्चर बेचेर मोटर किनेका छन् । "पहिले निकै गुल्जार थियो", मोटरले पुर्‍याएको असरप्रति सङ्केत गर्दै कोवाङका समाजसेवी इन्द्र तुलाचन भन्नुहुन्छ, "अहिले त्यो सबै हराएको छ ।" विगतमा उपल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकले कागबेनीबाटै घोडा लिएर जान्थे तर अहिले त्यो प्रवृत्ति फेरिएको छ । छुसाङको चैलेसम्म ट्रयाक्टर वा हिँडाइको विकल्प रोज्न पर्यटक बाध्य हुनुपर्छ । http://www.gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=19475&cat_id=4
Posted by Sharma Bishnu at 2:25 AM
Adams Kevin March 28, 2015 at 8:49 AM
डिजिटल समाज बुन्दैछ नेपाल
बिहे नगर्ने तर सँगै बस्ने
यसकारण डाकिए चिनियाँ राजदूत
नेपाली एप्लिकेसनको विश्व कीर्तिमान
हेर्ने होइन नेपाली थ्रीडी फिल्म ?
विदेश जाने कि ?
कान्तिपुर पढौं कि नागरिक ?
बन्दुकको घेरामा फिल्म हेर्नुपर्दा...!
यसकारण मनोज कन्ट्रोभर्सी रुचाउँछन्
बीबीसीको एकघण्टे कठोर अनुशासन
क्या राम्रो स्याउबारी...!
बानी सिक्न लाज नमान्ने कि ?
खेलौना : पढ्दा कन्ट्रोल है मित्रहरू !
अमेरिकामा नेपाली : हैसियत र यथार्थ
यस्तो छ मेरो ओस्कर प्रेडिक्सन
मेरो मनोरञ्जन अधिकार खोइ ?
बाबुरामसँग मेरा तीन फिल्म
हाम्रै समा थारुमाथि हलिउड फिल्म
गाम्लेका फुलेका सपना/जहाँ लोडसेडिङ हुँदैन
(बलिउडको एकसय वर्ष) हेजेमोनियल बाटोमा बलिउड
मनिषा न्यूयोर्कमा, फिल्म कोलम्बोमा
मेरो लोमान्थाङ घुमघाम (भाग २)
मायानगरीमा नक्कली स्वाद, नक्कली सन्तुष्टी
महावीरको सिलिकन भ्यालीमा
अमेरिकी गोरीसँग मेरो भेट
एकसय चालिस शब्दको शक्ति
ओ ! लोमान्थाङ (मेरो पहिलो मुस्ताङ घुमघाम)
जो २०१३ मा निर्देशक बन्दैछन्
ओस्करले सिकाएका पाठहरू
करोड क्लवले जोगाउला प्रतिष्ठा ?
राजेश हमाल : प्रेमीदेखि विद्रोहीसम्म
ज्याकी च्याङलाई नेपाली भिसा यसकारण लागेन
वर्ष २०१३ का उत्कृष्ट दस फिल्म : नेपाल, हलिउड र बल...